Hery - Tsiky dia ampy | 124
2006-04-17 @ 22:30 in Ankapobeny
Rehefa avy nihaino ny "Arahaba tratry ny Paka" notenenin'i Papa Benoa 16 izahay dia nandeha kely nivoaka ny tanàna toa ny mahazatra. Fa tsy lavitra loatra tamin'ity satria natahotra sao dia alavitra ny fitsangatsanganana ny ampitson'io. Lavitra be ny Papa fa izany hoe hita tamin'ny écran géant ihany
Albano, Rocca di Papa... tsy ratsy io toerana io. Blaogiko ity dia ny sariko ihany no asehoko (Hihihi hanta)
Ny alatsinain'ny Paka? Niaraka tamin'ny gasy. Tena reraka tanteraka. Iny angamba no fotoana nanaovako salegy lava indrindra... dia salegy mipetraka koa Samy nanovokovoka daholo fa rehefa tonga tany an-trano vao nitaraina hoe narary ny fe. Sitra-po manahirana e. Efa somary vizana ihany aho tamin'ito sary eto ambany ito ka tsy nisitrika intsony ny akanjo... Rehefa tonga taty an-trano anefa dia tsy maintsy mbola namita an'ilay com_lisitra (Component vaovao nataoko ho an'ny Joomla grrr.)
Paka ny andro
2006-04-15 @ 20:50 in Blaogy Dev
Paka ny andro androany. Fety lehibe indrindra ho an'ny kristianina. Tena kristianina ve aho? Tsy ny fandehanana any am-piangonana fotsiny, sy ny fiderana amin'ny vava fotsiny na ny asa fanasoavana sy ny fifadian-kanina tamin'ny karemy fotsiny. Fa ny fo sy fanahy iray manontolo no maha kristianina ny kristianina. Nandritra ny karemy dia lasa resa-be ny hoe nareo mifady hanina sy tsy mihinan-kena... fa ny anay ny toetra mihitsy no ovaina. Dia hoy aho hoe, raha izay no mba kely vitako aloha amin'izao fotoana izao? Tsy hoe tsy niezaka aho, fa misy zavatra mivaingana izay mora kokoa ny manao azy dia atao aloha, alohan'ny hanatratrarana dingana lehibebe kokoa. Fa raha ny fifehezan-tena kely isankarazany aza tsy vita dia afaka hihambo hoe nanova toetra mihitsy ve? Sao dia fialàna bala fotsiny ilay hoe tsy mifady hanina fa ny fo no amboarina? Sao dia voa double, sady tsy nifady hanina (tsy nanao ny ezaka mora indrindra) no tsy nanova fo (tsy nanao ny ezaka lehibe kokoa)? Raha nahavita azy rehetra moa, ny vatana sy ny fanahy, dia "meno male".
Tonga ity ny Paka, tsy voasakan'ny tsy nanaovana ezaka nandritra ny karemy... fa mbola tonga foana. Hitondra fifaliana sy fiadanana. Hoy ny fiteny matetika rehefa sendra fijaliana hoe "Tsy misy zoma masina tsy misy Paka" izany hoe aorian'ny fijaliana dia tsy maintsy hisy masoandro... nefa koa na dia tsy mijaly aza ianao mandritra ny zoma masina, ny Paka tsy maintsy tonga foana. (Izany hoe l'inverse n'est pas impossible). Na tsy mba nandray anjara tamin'ny fiomanana hitsena azy aza ianao, dia mbola tonga ho anao indray izy. Na mbola tsy mahatsapa aza ianao hoe ho anao no nijaliany sy nahafatesany ary nitsanganany, dia nijaly sy maty ary nitsangana ho anao Izy. Koa tonga izao ny Paka dia mba misaora azy.
2006-04-13 @ 22:22 in Ankapobeny
Io fiteny io indray izao no malaza... mitovy dika amin'ny hoe todo list ihany. Koa apetrako eto aloha ny roadmap à long sy à court terme
2006-04-10 @ 23:59 in Serasera.org
Taorian'ny fanamboarana ny "joomla component serasera" voalohany dia afaka nanokatra ny lalao.serasera.org aho. Nisokatra nanomboka omaly izany ny takelaka lalao.serasera.org izay hahitana lalao vitsivitsy amin'ny ho avy. Ny lalao efa mitranga ao dia ny Eseky (Jeu d'échec - Chess game) izay ahafahana mifanandrina amin'ny namana hafa. Misy flash games vitsivitsy ihany koa ho an'ireo izay tia jeux solitaires.
Mieritreritra ny hanamboatra game components vaovao aho fa mbola tsy azoko antsaina tsara hoe inona no azo atao. Gasigasy ihany no hitako fa mety hahasoa.
Alahelon'ny faha 86 taona
2006-04-06 @ 22:23 in Ankapobeny
Feno 86 androany i Nonno. Lehilahy tsotra (toy ny voromailala) kanefa fetsy (toa ny menarana) mova tsy tahaka ny voalazan'ny Baiboly :-). Niarahaba azy vao maraina aho androany, nieritreritra fa hisaotra an'Andriamanitra izy amin'izao faha-86 taonany izao. Tsy izany anefa no niseho... nalahelo izy. Dia mbola niseho indray ny fahatsorany.
Ny alahelony? Mbola velona eto amin'ity tany feno haratsiana ity (sic!). Hatramin'izay, hoy izy, tsy mbola nisy an'izany mifamono ao antrano izany (vaovao nivoaka tamin'ny gazety vao hitany indray angamba io). Miha-rava izao tontolo izao, ny laingan'ny mpanao politika no heno etsy sy eroa. "Ireo olona rehetra manao fampanantenana ireo (satria mandeha be ny propagandy eto Italia) dia fantatro daholo ny nataony sy ny nataon'ireo tahafiny... kanefa amin'izao izy ireo miseho hitondra soa ho an'ny firenena". Dia lasa indray aloha ny resa-be nandritra ny minitra maromaro nanaporofoiny fa tena tsy mandeha mihitsy ny fiainana eto amin'ity tany ity. Noho izany tokony efa ho faty izy... "Matahotra aho, hoy ihany izy, kanefa ilay mandalo ny fahafatesana no atahorako fa tsy ny ao ambadiky ny fahafatesana".
Ny hany navaliko an'i Nonno dia hoe misy olona maro maniry ny mbola ho ela velona. Misy ireo mararin'ny aretina tsy mety sitrana intsony, ka efa voafetra ny andro iainany... ary maniry mafy ny mbola hiaina maharitra. Misy ireo isaky ny alina dia manahy sao dia tsy hifoha. Misy ireo isaky ny mivoaka ny trano dia matahotra sao dia tsy ho tafaverina velona ao antrano intsony. Misy ireo maniry mafy ny mbola hiaina eto amin'ity tany ity... koa misaora an'Andriamanitra raha mbola nomeny tombon'andro. Matoa ianao mbola velona dia ao raha... koa mifalia amin'izay mbola segondra omeny anao. Sady tsy izao tontolo izao no ratsy... fa ny olona sasany eo amin'izao tontolo izao. Any ho any, misy toerana, mbola miaina ao anaty filaminantsaina ny olona, mbola miadana ny mifankatia ny olona.
Comunque, buon compleanno e tanti auguri.
«Mialoha 1 2 3 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 Manaraka»